दाताको सहयोगमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्दै निकुञ्ज | गृहपृष्ठ
Home प्रदेश ०३ दाताको सहयोगमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्दै निकुञ्ज
on: २ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १५:३७ प्रदेश ०३, प्रदेश समाचार
जेठ २, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा दाताको सहयोगमा ८६ हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन गरिँदै छ । नियमित घाँस व्यवस्थापन थोरै क्षेत्रफलमा हुँदा घाँसको अभावमा वन्यजन्तु बस्ती पस्न थालेपछि निकुञ्जको आग्रह र दाताको सहयोगमा थप क्षेत्रमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेका अनुसार निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रको ट्याम्पल टाइगर नजिकै ३५ हेक्टरमा घाँसे मैदान व्यवस्थापनको काम शुरु भएको छ । ताल परियोजनाको सहयोगमा रू. १८ लाख खर्च गरेर घाँस व्यवस्थापन गर्न शुरु गरिएको हो ।
यसैगरी निकुञ्जको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको खोरिया मुहान र टाइगर टप क्षेत्रमा २५ दशमलव ५ हेक्टरका दरले ५१ हेक्टरमा घाँसे मैदान व्यवस्थापनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । ‘जेडएसएल’ नामक दाताको रू. २५ लाखको सहयोगमा सो क्षेत्रमा घाँसे मैदान व्यवस्थापन थालिएको हो ।
निकुञ्जको नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न १५ ठाउँमा ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँसे मैदान व्यवस्थापनको काम सम्पन्न भएको छ । एकपटक घाँसे मैदान व्यवस्थापन गर्दा एक हेक्टरमा रू. ५० हजार हाराहारी खर्च हुने गरेको छ । घिमिरेका अनुसार अग्ला ठूला ढड्डी फाँड्ने, घाँसलाई अतिक्रमण गर्ने झार र बुट्यान उखेल्ने, अग्ला घाँस काट्ने जस्ता काम व्यक्तिमार्फत गरिँदै आएको छ ।
निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदकुमार ढकालका अनुसार बजेट अभावमा आवश्यक मात्रामा घाँस व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने गरेको छ । निकुञ्जमा १० हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा घाँस रहेको छ । जसमध्ये १ हजार हेक्टर क्षेत्रफल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि हरेक वर्ष २०० हेक्टर हाराहारी मात्र व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । जसका कारण निकुञ्जभित्रका वन्यजन्तु घाँस खोजीका लागि बस्ती पस्ने गरेका छन् ।
निकुञ्ज विशेष गरेर एकसिंगे गैंडा र पाटेबाघका लागि प्रख्यात छ ।
यस निकुञ्जमा ४३ प्रजातिका स्तनधारी प्राणी, ४५० प्रजातिका चराचुरूंगी र ४५ प्रजातिका जलथल तथा घस्रने प्राणीसँगै १०० भन्दा बढी जातका माछा पाइन्छ । यहाँ पाइने प्रमुख स्तनधारी प्राणीमा हरिण, चित्तल, बाँदर तथा लङ्गुर बाँदर आदि पर्दछन् । रासस
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १६:०६
९ जेष्ठ २०७६, बिहीबार १२:२४
मेघौली विमानस्थललाई पर्यटकीय विमानस्थल बनाउन पहल
२ जेष्ठ २०७६, बिहीबार ११:२६
अर्नाको समूहमा एक्लो पोथी बाह्रसिङ्गे !
२५ बैशाख २०७६, बुधबार १२:४९
विद्युतीय भुक्तानीको कारोबार सीमा बढ्यो, मोबाइल बैंकिङ प्रतिदिन ५० हजार, इन्टरनेट भुक्तानी १० लाखसम्म
घुस लिदै गर्दा नापी सर्वेक्षक न्यौपाने पक्राउ
पूर्वप्रधानन्यायाधीश खत्रीको निधन, शनिवार अन्त्येष्टि
७२ लाखको लागानीमा सर्लाहीमा झोलुङ्गेपुल बन्दै
बर्दियाको राजापुर सबस्टेसन संचालन, विद्युत् आपूर्ति सुधार हुँदै
रिलायन्स फाइनान्सको लाभांश सुरक्षित गर्ने आइतवार अन्तिम दिन
सातामा ४.१६ अंकले घट्दा महीनामा ५१.८७ अंकले बढ्यो नेप्से, साताभरिमा कुन कुन कम्पनी भए नेप्सेमा सूचिकृत ?
प्रदेश–१ : ४६ अर्बको बजेट, ४५ प्रतिशत पूर्वाधारलाई, लोकप्रिय र महत्वकांक्षी कार्यक्रम नसमेटिने
करोडौंको नक्कली भारु लिन एयरपोर्ट पुगेका यूनुस अन्सारी प्रहरी फन्दामा, एउटा सुटकेसमा साढे ३ करोड, दुईओटाको गन्नै बाँकी